राजनीति – Page 324 – Halkaro
निर्वाचन लक्षित सुरक्षा योजना बनाउँदै गृहः सेनासमेत परिचालन गरिने
प्रकाशित मिति : २०७३, १८ फाल्गुन बुधबार
काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वच्छ, शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन गृह मन्त्रालयले निर्वाचनकेन्द्रित सुरक्षा योजनाको गृहकार्य थालेको छ । सरकारले ३१ वैशाखमा गर्ने घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले सुरक्षा योजनाको गृहकार्य थालेको छ । गृह मन्त्रालयले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनकै समयमा अख्तियार गरेजस्तै सुरक्षा घेरा लागू गर्ने भएको छ । अघिल्लो […]
निर्वाचन अाचारसंहिता अाज देखि कसले कति गडी चलाउन पाउने ?
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले बुधबारबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको आयोग बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ र स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ बुधबारदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार आचारसंहिताबारे बुधबार प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुँदै छ । स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिलाई पनि निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नेछ । […]
महाउत्सवमा प्रधानमन्त्रीको निम्तोः अनसन्तुष्ट मतपेटिकामा पोख्नुस
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यवस्थापिका संसद्ले संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान नगरे पनि चुनावमा सहभागी हुन मधेसकेन्द्रित दलहरूसहित सबैसँग आग्रह गरेका छन् । उनले आफ्ना सबै असन्तुष्टि मतपत्रमा पोखेर स्थानीय चुनावमा सहयोग गर्न मधेसी जनतालाई आह्वान गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै दाहालले दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको चुनाव […]
प्रधानमन्त्रीद्वार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन, (के भने ? पढ्नुहोस संवोधनको पूर्णपाठ)
प्रकाशित मिति : २०७३, १७ फाल्गुन मंगलवार March 1, 2017
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अाज साँझ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपाली आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, १. सबैभन्दा पहिले म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको निर्माणका लागि आत्मबलिदानको कीर्तिमान रच्ने बीर शहिदहरु, बेपत्ता र अङ्गभङ्ग योद्धाहरू र महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेशी, जनजाति […]
स्वदेश फर्किँदै राय नयाँ राजदुत अाउन समय लाग्ने
प्रकाशित मिति : २०७३, १७ फाल्गुन मंगलवार
काठमाडौँ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायको कार्यकाल मंगलबारदेखि सकिएको छ । उनी अाफ्नो कार्यकाल पुरा गरी स्वदेश फर्किँदै छन् । यसैक्रममा रायले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग विदार्इ भेट गरेका छन् । संविधान जारी हुनु अगाडि राजदुतको रूपमा नेपाल अाएका रायको कार्यकालमा नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध उतार चढावपूर्ण रह्यो । उनकै कार्यकालमा नेपालमा नाकाबन्दी भयो […]
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अाज देशबासीको नाममा सम्बाेधन गर्ने
प्रकाशित मिति : २०७३, १७ फाल्गुन मंगलवार February 28, 2017
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीले मंगलबार देशबासीलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् । उनले साँझ सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट देशबासीलाई सम्बोधन गर्न लागेका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । स्थानीय निकायको निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले देशबासीलार्इ सम्बोधन गर्ने बताएको छ ।
सत्यनिरूपरण अायोग विवादमा ६० हजार उजुरीको भविष्य अन्यौलमा
काठमाडौँ । द्वन्द्वकालीन घटनाका उजुरीमा छानबिनका लागि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङसहित बहुमत पदाधिकारी संस्थाभित्रकै द्वन्द्वका कारण राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेको दाबी संस्थाकै सदस्यले गरेका छन् । पदाधिकारीले राजीनामा दिए आयोगमा परेका झन्डै ६० हजार उजुरीको भविष्य संकटमा पर्ने देखिएको छ । अध्यक्ष गुरुङ राजीनामा दिने भन्दै फागुन १ गतेदेखि कार्यालय […]
रविन्द्र मिश्रको नयाँ पार्टि कस्तो बन्ला ?
काठमाडौँ । चर्चित पत्रकार रविन्द्र मिश्रले बीबीसी नेपाली सेवा छाड्ने भएका छन् । राजनीतिमा लाग्न उनले बीबीसी नेपाली सेवाको मासिक ६ लाखको जागिर छाड्न लगेका हुन् । दृष्टि साप्ताहिकमा खबर छ– मिश्र नयाँ पार्टी स्थापना गर्न लागेका हुन । राजनीतिमै लाग्न उनले यसअघि हेल्प नेपाल नामक संस्थामार्फत् समाजसेवा गर्दै आएका छन् । सोही संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई […]
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सेना समेत परिचालन गरिने
काठमाडौँ । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षाका लागि तिनै वटा सुरक्षा निकायलार्इ परिचालन गरिने भएको छ । सुरक्षा परिषदले निर्वाचनका लागि तिनै तहको सुरक्षा योजना तयार गरि नेपाली सेनालार्इ समेत परिचालन गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ । रक्षा मन्त्रालय उच्च स्रोतका निर्वाचनको तेस्रो तथा अन्तिम घेराको जिम्मा नेपाली सेनालार्इ दिइने छ । त्यस्तै बीचको […]